သက်ဝေ: ကျွန်တော့် အကြောင်း
Hmoo April 23, 2010 at 11:38 PM
mirror April 24, 2010 at 4:16 AM
အော်ခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲ ကတ်ကြေးလေးလဲ ပါရတာပါပဲလားး)
ရွှေရတုမှတ်တမ်း April 24, 2010 at 7:13 AM
Vista April 24, 2010 at 9:43 AM
စာရွက်ဖိတဲ့တုံး၊ ခဲတံ ၊ စတေပလာ ၊ ဘလာ ..ဘာလာ ..များကြီးရှိသေးဒေ...
ကြည် April 24, 2010 at 12:05 PM
ကြည့်ရတာသက်ဝေ တစ်ယောက် ကန်ဇွန်းရွက် ချဉ်ပေါင်ရွက်တွေကိုတောင် ကပ်ကြေးလေးနဲ့ ညှပ်တယ်ထင်ပါရဲ့။
rose of sharon April 24, 2010 at 4:47 PM
တော်တော် အသုံးဝင်တဲ့ကတ်ကြေးဘဲနော်... အိမ်ကကတ်ကြေးတွေက အဲလောက်အသုံးမဝင်ဘူး :D
ဇွန်မိုးစက် April 24, 2010 at 9:25 PM
အစ်မရဲ့ အိုင်ဒီယာနဲ့ အရေးအသားကို သဘောကျသွားတယ်။
နောက်ထပ် ဘာတွေ လာအုံးမှာပါလိမ့်။း)
ကိုလူထွေး April 24, 2010 at 11:50 PM
အခုဆိုရင်တော့ ကျနော့နာမည်ကို အစွဲပြုပြီး
scissor kick တို့
သင်းနွယ်ဇင် April 25, 2010 at 7:14 PM
ဖတ်လို့အတော်ကို့ကောင်းတယ် ခင်ဗျ။း)
SHWE ZIN U April 25, 2010 at 8:13 PM
ကပ်ကြေး ထဲ မှာတော့ ဘိတ် ကပ်ကြေးကိုက် ကို အကြိုက်ဆုံး ဘဲဗျာ..
blueskyforest April 26, 2010 at 5:36 AM
ရေးတတ်ရင် ၀တ္တုဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်မှာပဲ။ တချို့ လူတွေက စားပွဲရှင်းရင်းတွေ့တဲ့ ကပ်ကြေးတောင် ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတိရေး လိုက်ပြီ။ ဒို့ကိုတွေ့ရင် အခန်းဆက်ဝတ္တုရှည်တွေများ ရေးဦးမလားမသိ။ ရှောင်နေမှ။းD
khin oo may April 27, 2010 at 11:17 AM
နစ်ချောင်းဝယ်ထားတယ် တစ်ချောင်းပျောက်တတ်လွန်းလို့..ဟော တစ်ချေငာ်းပျေက်နေရင် နောင်တစ်ချောင်းနဲ့ညှပ်. ကြားထဲမှာသူ့ဘာသာ သူပြန်ထွက်လာ. ဟန်ကိုကျလို့။